UNYSSA AL GHUL - UTOLO
Ngomgqibelo Ebusuku Phila
Yintoni, ubungazi ukuba uTalia al Ghul wayenodade? Ngaba ubucinga ukuba kuyo yonke iminyaka yakhe emide, uRa's al Ghul wabopha kuphela inzala enye?
Ndiyathetha ukuba bekukho laa mfana entshona yakudala ovela kwisiqendu sikaJona Hex Batman: Uthotho lweeVidiyo Ndizamile ukucaphula nje.
Isikhokelo seTV sinika ingxelo yoko U-Katrina Law (Jonga Spartacus ), ukwibhodi yokudlala uNyssa al Ghul, (kakhulu) udadewabo osele ekhulile kaTalia owaziwayo. UNyssa Raatko wadalwa ngu UGreg Rucka ukulungiselela iinkonzo Batman: Ukufa kunye neeNtombi , intombi yakhulelwa ngexa uRa ’wayetyelele iRussia ngeminyaka yoo-1800. UNyssa wakhulela kumabali kamama wakhe wothando lweNtloko yeDemon, kwaye ebudaleni wazihlukanisa noRa ngobukrelekrele bakhe, izakhono zakhe zokulwa, kunye nokulandela umkhondo we-ecoterrorist engenakwenzeka kwisiseko sakhe eMntla Afrika. Uyamfaka njengowesibini emyalelweni kwaye uyamvumela ukuba asebenzise imingxunya yakhe kaLazaro, de waphoxeka ngumsebenzi wakhe wokubulala abantu. URa wamyeka, waze wamnika nomngxunya kaLazaro eYurophu, elindele ukuba ekugqibeleni abuyele emhlambini. Xa kwacaca ukuba akazukuvuma ukumthobela, engayi kuvumela nayiphi na inzala yakhe, wayilahla, engavumi ukuyisindisa yona kunye nosapho lwayo kwiinkampu zoxinaniso zaseJamani kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, ukuqala kwentiyo yokwenene kaNyssa kuyise .
Oogqirha bamaNazi baqaphela ukuba ifiziliji kaNyssa, etshintshwe yimingxuma kaLazaro, yahlukile, kwaye wenziwa kuvavanyo olwamenza wangachumi. Kwakungekade inzala yakhe yokugqibela isweleke ngaphandle kweendlalifa awathi uNyssa ekugqibeleni wabeka iyelenqe lokumbulala ukuba enze isenzo, oko kubandakanya ukuguqula uTalia amchase. Uyaphumelela, kodwa kuyatyhilwa ukuba ekugqibeleni ukungcatshwa kwakhe kwaxelwa kwangaphambili kwaye kwafunwa nguRa, njengoko kukhokelela kuzo zombini iintombi zakhe azithandayo ziqonda ukuba iinjongo zakhe zezazo. Ukufa kunye neentombi iphela ngoNyssa noTalia bafumana ulawulo oludibeneyo kwi-League of Assassins kunye neenjongo zikaRa zokuphelisa uninzi lwabemi behlabathi.
Isikhokelo sikamabonwakude sicinga ukuba uninzi lweli bali lingekhe lincanyathiselwe kwaNyssa kwangoko: uzakuvela njengelungu le-League of Assassins, eze kwiStarling City ukulwa ne-Black Canary. Kwi DatM , Izicwangciso zikaNyssa zibandakanya ukubulala uSuperman, ngoko ayikude kakhulu eblue. Yenye inenekazi elingaphezulu kwisamente ye Utolo , omnye umntu okhohlakeleyo waseBatman, kunye nelinye icebo kuRa's al Ghul.
(nge IHerohero yeHorhero .)
ubukele umoya uvuka nge-english sub
shakespeare epaki abaphindezeli
amantombazana amatshelayo amagama e-bracket bracket
Ngaba kuya kubakho ezinye iifayile
Umxhuzulane uwela kwimfazwe yegalufa